Diyaar garowgii ugu dambeeyay doorashada madaxweynaha oo ka socota Muqdisho – GOBOLADA.COM
Diyaar garowgii ugu dambeeyay doorashada madaxweynaha oo ka socota Muqdisho
May 15, 2022 May 15, 2022 AbdukadirLeave a Comment on Diyaar garowgii ugu dambeeyay doorashada madaxweynaha oo ka socota Muqdisho
Magaalada Muqdisho waxaa ka socda diyaar garowgii ugu dambeyay ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee afarta sano ee soo socota.Doorashadaan oo waqtigeedii dhaanftay wax ka badan sanad ayaa isha aad loogu wada hayaa, waxaana ku tartamaya in kabadan 30 murashax oo uu ku jiro madaxweynaha hadda talada haya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Teendhada Afisyooni oo ku taalla aag aad loo ilaaliyo ayay doorashadu ka dhacaysaa,waxaana inta badan ammaanka sugaya ciidamada ATMIS, ee ka tirsan howlgalka Midowga Afrika, ee horey loo oran jiray AMISOM.Waxaase jira ciidamo Soomaali ah oo aan badneyn oo ka qayb qaadanaya sugidda amniga gudaha goobta ay doorashadu ka dhacayso.
In ka badan 300 oo ka tirsan labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dooranaya madaxwewynaha,iyadoo la filayo in wareegayo kala duwan ay doorashadu qaadato maadaama musharrxiintu ay badanyihiin. Qaar ka mid ah musharxiinta ayaa saacadihii la soo dhaafay sheegay inay tanaasuleen halka qaarna ay sheegeen inay isaga hareen tartanka.
Olalihii ugu xoogganaa oo ay wadeen musharraxiintu ayaa xalay laga dareemay Muqdisho,waxaana mid walba uu u xusul duubayaa sidii uu ugu guulaysan lahaa talada dalka Soomaaliya oo muddo ay ka jiraan dhibaatooyin ay ka mid yihiin amniga,dhaqaalaha iyo caafimaadka,waxaana xubnaha tartamaya mid walba uu dhawaan baarlamaanka ka hor sameeyay ballan qaadyo uu wax kaga qabanayo arrimo badan oo dalka ka jira haddii uu xilka ku guulaysto.
Musharixiinta madaxweynaha Soomaaliya oo Hal Arin laga codsaday
Madaxda Somaliland iyo Mucaaradka oo Heshiis ka gaaray khilaaf soo kala dhex galay
Ciidsamada Booliska oo Hawlgalo ka sameeyay Degmada Warta -Nabada
Dawlada Sacuudiga oo shaacisay in Haweenka ay xajinkaraan Muxrim la’aan